Ezinye izinto eziphambili zokwazi malunga neMfazwe kwiDrugs
Iyintoni iMfazwe kwiDrugs?
"Imfazwe kwiDrugs" iyigama eliqhelekileyo elisetyenziselwa ukubhekisela kumanyathelo karhulumente karhulumente wokuphelisa ukungenisa, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nokusetyenziswa kweziyobisi ezingekho mthethweni. Ilizwi eliyingqungquthela elingabhekiseli kwindlela enenjongo ethile kumgaqo othile okanye injongo, kodwa kunoko uluhlu lweenkqubo ezichasene neziyobisi ezibhekiselele ekubhekiseleleni kwinjongo efanayo yokuphela kokusetyenziswa kweziyobisi.
Imvelaphi yegama elithi "Imfazwe kwiDrugs"
UMongameli uDwight D.
U-Eisenhower waqala into ethi i-New York Times yabiza "imfazwe emitsha malunga nokulutha kweengxaki zengxwabangxwaba kwiindawo zendawo, zesizwe kunye namazwe ngamazwe" ngokusekwa kweKomiti yeeNkcazo zeNarcotics ngoNovemba 27, 1954, imizamo yeziyobisi. Inqaku elithi "Imfazwe kwiDrugs" yokuqala yaqala ukusebenza emva kokuba uMongameli uRichard Nixon wasebenzise kwingqungquthela yenkomfa ngoJuni 17, 1971, ngexesha apho echaza iziyobisi ezingekho mthethweni ngokuthi "intshaba yoluntu jikelele eMelika."
Inkqubo ye-Federal Anti-drug drug
Ngowe- 1914: UMthetho weRhafu weRhafu waseHarrison ulawula ukuhanjiswa kwee-narcotics (heroin nezinye i-opiates). Ukunyanzeliswa komthetho we-Federal kuya kuthi emva koko kungabonakali ngokucacileyo i-cocaine, isistim se-nervous central stimulant, njenge "narcotic" kwaye ilawula phantsi komthetho ofanayo.
Ngowe-1937: UMthetho weRhafu waseMarijuana ukwandisa izithintelo zomthetho ukugubha inambuzane.
Ngowe-1954: Ulawulo lwe- Eisenhower luba luphawu olubalulekileyo, nangona kunjalo luphawu olusisigxina, isinyathelo ekumiseni iKomiti ye-Interdepartmental ye-Narcotics yase-United States.
Ngo-1970: UMthetho wokuLungisa nokuLawulwa koMthetho woLwaphulo-mthetho woLwabiwo-1970 uqokelele umgaqo-nkqubo we-anti-drug as we know it.
Iindleko Zomntu NgeMfazwe kwizidakamizwa
Ngokwe-Bureau of Justice Statistics, ama-55% amabanjwa aseburhulumenteni kunye nama-21% amabanjwa aseburhulumenteni abanjwa ejele ngenxa yezigwenxa ezinxulumene neziyobisi.
Oku kuthetha ukuba abantu abangaphezu kwesigidi bebanjwe ngokubanjwe ngenxa yeemithetho-mthetho-nxamnye ne-Wyoming. I-yorhwebo yezobisi engekho mthethweni iphinde ixhase imisebenzi yegundane, kwaye ingathintelo ngokungahambelani nenani elingaziwa lokubulala abantu. (IiNgxelo zeNkundla zoLwaphulo-mthetho zeFBI zichaza i-4% yokubulala abantu njengento ebangelwa ngokurhweba kweziyobisi ezingekho mthethweni, kodwa idlala indima engqalileyo kwipesenteji enkulu kakhulu yokuzibulala.)
Iindleko zeMali zeMfazwe kwiDrugs
Ngokwe-Hlabathi ye-White House yoLawulo loLwabiwo loLwabiwo-mali, njengoko kuchaziwe kwi-Action America ye-Medication War Cost Clock, urhulumente wephondo uqobo uqikelelwe ukusebenzisa ii-$ 22 ezigidigidi kwiMfazwe ngeziDakamizwa ngo-2009. UMerika uthetha uphando lweYunivesithi ka-1998 olufumene ukuba amazwe asetshenzisile ngaphezu kweebhiliyoni ezingama-30 kwiimfuno zonyanzeliso zomthetho ngexesha lolo nyaka.
Umgaqo-siseko weMfazwe kwiDrugs
Ugunyaziwe karhulumente wephondo lokutshutshisa izigwenxa ezinxulumene neziyobisi zivela kwiCandelo le-I ye-Commerce Clause, enika iCongress igunya lokuba "lawula iintengiso kunye neentlanga zangaphandle, kunye nakwamanye amazwe, kunye neentlanga zamaNdiya" - kodwa iinjongo zokunyanzeliswa komthetho abaphuli beziyobisi ngisho nokuba izinto ezingekho mthethweni zenziwe kwaye zihanjiswe kuphela kwimigqaliselo yombuso.
Ingqiqo kaRhulumente malunga neMfazwe kwiDrugs
Ngokwe-Oktobha 2008, i-poll yokuhlola i-Zogby ye-voters, i-76% ichaza iMfazwe kwiDrugs njengokuhluleka. Ngo-2009, ulawulo luka-Obama lwazisa ukuba aluyi kusasebenzisa ibinzana elithi "Imfazwe kwizidakamizwa" ukubhekisela kwimigudu ye-anti-drug, ukuqala kokusebenza kwiminyaka engama-40 ukuba ungenzi njalo.
Umlando wokuTyala kweMatyala eMelika
Ukuphila okudlulileyo 90 eMelika ayikho iMinyaka eBhitshi
Imbali yePort Royal
Kutheni Sibheka uBob ngeeApile kwiHalloween?
Yintoni eyahlukileyo phakathi kwe-Sci-Fi kunye neFantasy?
Ukugcina i-Kite, i-Double Grew Vision ka-Andrew Geller
I-1930 I-Dust Bowl Isomiso